Onyankopɔn a ‘Wayɛ Krado sɛ Ɔde Bɔne Befiri’ | Bɛn Yehowa
Onyankopɔn a ‘Wayɛ Krado sɛ Ɔde Bɔne Befiri’
1-3. (a) Adesoa duruduru bɛn na na ɛsõ odwontofo Dawid, na ɛyɛɛ dɛn na onyaa awerɛkyekye maa ne koma a na abubu no? (b) Sɛ yɛyɛ bɔne a, adesoa bɛn na ebetumi abɛtɔ yɛn so, nanso dɛn ho awerɛhyem na Yehowa de ma yɛn?
ODWONTOFO Dawid kyerɛwee sɛ: “Me mfomso aboro me ti so, ɛdɛn me so sɛ adesoa duruduru. Mahodwow, na mabubu pasaa.” (Dwom 38:4, 8) Na Dawid nim sɛnea sɛ obi ahonim bu no fɔ a ɛyɛ adesoa a emu yɛ duru fa. Nanso, onyaa awerɛkyekye wɔ ne koma a na abubu no ho. Ɔtee ase sɛ Yehowa kyi bɔne, nanso Onkyi ɔbɔnefo a wanu ne ho nokware mu agyae bɔne yɛ no. Bere a na Dawid wɔ ahotoso koraa sɛ Yehowa wɔ ɔpɛ sɛ ɔbɛda mmɔborohunu adi akyerɛ abɔnefo a wɔanu wɔn ho no, ɔkae sɛ: “Wo, Yehowa, . . . woayɛ krado sɛ wode bɔne befiri.”—Dwom 86:5, NW.
2 Sɛ yɛyɛ bɔne a, yɛn nso yɛn ahonim a ebu yɛn fɔ no betumi ayɛ adesoa duruduru ama yɛn. Ahonu yi yɛ papa. Ebetumi aka yɛn ma yɛayɛ nneɛma a ɛho hia de asiesie yɛn mfomso ahorow. Nanso, asiane a ɛwom ne sɛ, afodi betumi abunkam yɛn so. Yɛn koma a ebu yɛn fɔ no betumi ama yɛakɔ so ate nka sɛ Yehowa remfa nkyɛ yɛn, ɛmfa ho sɛnea yɛanu yɛn ho no. Sɛ afodi ‘mene’ yɛn a, Satan betumi ama yɛapa abaw, na yɛate nka sɛ Yehowa bu yɛn sɛ nnipa a mfaso nni yɛn so, ɛne sɛ yɛmfata sɛ yɛsom no.—2 Korintofo 2:5-11.
3 So saa na Yehowa bu yɛn? Dabida! Bɔne fafiri yɛ Yehowa dɔ kɛse no fã. Ɔma yɛn awerɛhyem wɔ N’asɛm mu sɛ, sɛ yɛda nokware ahonu a efi komam adi a, wayɛ krado sɛ ɔde yɛn bɔne befiri yɛn. (Mmebusɛm 28:13) Ma yensusuw nea enti a Yehowa de bɔne firi ne ɔkwan a ɔfa so yɛ saa ho na amma yɛannya adwene sɛ yentumi nnya ne hɔ bɔne fafiri.
Nea Enti a Yehowa ‘Ayɛ Krado sɛ Ɔde Bɔne Befiri’
4. Dɛn na Yehowa kae wɔ yɛn su ho, na ɔkwan bɛn so na eyi ka sɛnea ɔne yɛn di no?
4 Yehowa nim yɛn sintɔ ahorow. Dwom 103:14 ka sɛ: “Onim yɛn su, ɔkae sɛ yɛyɛ mfutuma.” Ne werɛ mfi sɛ yɛyɛ mfutuma, abɔde a esiane sintɔ nti yɛwɔ mmerɛwyɛ ahorow no. Asɛm a ɛne sɛ onim “yɛn su” no kae yɛn sɛ Bible de Yehowa toto ɔnwemfo ho, na ɛde yɛn toto anwenne a ɔyɛ no ho. * (Yeremia 18:2-6) Ɔnwemfo Kɛse no hwɛ sɛnea yɛte, sɛ́ abɔnefo a yɛyɛ mmerɛw ne sɛnea yɛyɛ n’akwankyerɛ ho biribi anaa yɛnyɛ ho biribi no so na ɔne yɛn di.
5. Ɔkwan bɛn so na Romafo nhoma no ka tumi a bɔne wɔ no ho asɛm?
5 Yehowa nim sɛnea bɔne wɔ tumi no. N’asɛm ka bɔne ho asɛm sɛ tumi bi a ano yɛ den a anya onipa so nkɛntɛnso bɔne. Bɔne nkɛntɛnso mu yɛ den dɛn? Ɔsomafo Paulo kyerɛkyerɛɛ mu wɔ Romafo nhoma no mu sɛ: Yɛhyɛ “bɔne ase” sɛnea asraafo hyɛ wɔn sahene ase no (Romafo 3:9); ‘adi’ adesamma so sɛ ɔhene (Romafo 5:21); “ɛte” yɛn mu (Romafo 7:17, 20); ne “mmara” yɛ adwuma wɔ yɛn mu bere nyinaa, na sɛnea ɛte no, ɛrepere adi yɛn asetra so. (Romafo 7:23, 25) Hwɛ nkɛntɛnso kɛse a bɔne wɔ wɔ yɛn honam a ɛyɛ mmerɛw no so!—Romafo 7:21, 24.
6, 7. (a) Yehowa bu wɔn a wɔde koma a abubu hwehwɛ ne mmɔborohunu no dɛn? (b) Dɛn nti na ɛnsɛ sɛ yɛde Onyankopɔn mmɔborohunu yɛ nea yɛpɛ?
6 Enti, Yehowa nim sɛ ɛmfa ho ɔpɛ a ebia yɛwɔ sɛ yebefi komam ayɛ osetie a ɛyɛ pɛ ama no no, yɛrentumi nyɛ saa. Ofi ɔdɔ mu ma yɛn awerɛhyem sɛ sɛ yɛde koma a abubu srɛ ne mmɔborohunu sɛ agya a, ɔde befiri yɛn. Dwom 51:17 ka sɛ: “Onyankopɔn afɔre ne honhom a abubu; Onyankopɔn, koma a abubu na apɛtɛw na worempo.” Yehowa rempo koma a afobu ama “abubu na apɛtɛw,” na ɔremmu n’ani nso ngu so da.
7 Nanso, eyi kyerɛ sɛ yebetumi de Onyankopɔn mmɔborohunu ayɛ nea yɛpɛ, na yɛde abɔnefo a yɛyɛ no ayɛ anoyi agyina so ayɛ bɔne anaa? Dabida! Yehowa nnyina nkate kɛkɛ so nyɛ ade. Ɛwɔ baabi a ne mmɔborohunu kosi. Ɔremfa wɔn a wopirim wɔn koma boapa yɛ bɔne na wonnu wɔn ho no bɔne mfiri wɔn da. (Hebrifo 10:26) Nanso, sɛ ohu koma a abubu a, ɔyɛ krado de bɔne firi. Afei ma yensusuw nsɛm a emu da hɔ a wɔde dii dwuma wɔ Bible mu de kyerɛkyerɛɛ Yehowa dɔ no fã a ɛyɛ anigye yi mu no bi ho.
Ɔkwan Bɛn so na Yehowa De Firi Koraa?
8. Sɛnea yɛbɛka no no, sɛ Yehowa de yɛn bɔne kyɛ yɛn a, dɛn na ɔyɛ, na ahotoso bɛn na eyi ma yenya?
8 Dawid a na wanu ne ho no kae sɛ: ‘Mekaa me bɔne mekyerɛɛ wo, na mankora m’amumɔyɛ so. Na wo na wuyii me bɔne so mmusu.’ (Dwom 32:5) Asɛm ‘wuyii’ no kyerɛ Hebri asɛmfua bi a nea ɛkyerɛ titiriw ne “ma so,” anaa “soa.” Dwuma a wɔde di wɔ ha no kyerɛ “afodi, bɔne, anaa mmarato” a woyi kɔ. Enti sɛnea yɛbɛka no no, Yehowa maa Dawid bɔne so kɔe. Akyinnye biara nni ho sɛ, eyi maa afobu a na ɛsõ Dawid no ano brɛɛ ase. (Dwom 32:3) Yɛn nso yebetumi anya Onyankopɔn mu ahotoso koraa sɛ ɔde wɔn a wogyina Yesu agyede afɔre no mu gyidi a wɔwɔ so srɛ ne hɔ fafiri no bɔne kyɛ wɔn.—Mateo 20:28.
9. Yehowa yi yɛn bɔne fi yɛn ho kɔ akyirikyiri kodu he?
9 Dawid de asɛm foforo a emu da hɔ kyerɛkyerɛɛ Yehowa fafiri mu sɛ: ‘Sɛ apuei ne atɔe ntam ware no, sɛ wama yɛn ne yɛn mmarato ntam aware ne no.’ (Dwom 103:12) Apuei ne atɔe ntam kwan ware dɛn? Ɔkwan bi so no, apuei ne atɔe ntam kwan ware bere nyinaa; afã abien no ntumi nhyia da. Nhomanimfo bi ka sɛ asɛm yi kyerɛ “sɛnea ebetumi ayɛ yiye; sɛnea yebetumi de yɛn adwene abu.” Dawid nsɛm a efi honhom mu no ma yehu sɛ, sɛ Yehowa de firi a, oyi yɛn bɔne fi yɛn ho kɔ akyirikyiri koraa.
‘Mo bɔne bɛyɛ fitaa te sɛ sukyerɛmma’
10. Sɛ Yehowa de yɛn bɔne firi yɛn a, dɛn nti na ɛnsɛ sɛ yɛte nka sɛ bɔne a ɛte saa no bɛtra yɛn so yɛn nkwa nna a aka nyinaa?
10 So woabɔ mmɔden sɛ wobɛpopa nkekae bi afi atade bi mu pɛn? Ebia ɛmfa ho mmɔden biara a wobɔe no, woda so hu nkekae no. Hyɛ sɛnea Yehowa kyerɛkyerɛ tumi a ɔwɔ sɛ ɔde bɔne firi mu no nsow: ‘Sɛ mo bɔne te sɛ dammaramma a, ɛbɛhoa sɛ sukyerɛma, sɛ ɛbere sɛ nkranhoma a, ɛbɛyɛ sɛ oguan nhwi.’ (Yesaia 1:18) Asɛmfua “dammaramma” kyerɛ ade kɔkɔɔ. * Ná “nkranhoma” yɛ aduru a na wɔde hyɛ ntama no mu nea ani dum paa. (Nahum 2:3) Yɛn ankasa mmɔdenbɔ ntumi nyi bɔne nkekae mfi yɛn ho da. Nanso, Yehowa betumi ayi bɔne a ɛte sɛ dammaramma ne nkranhoma no, na wama ayɛ fitaa te sɛ sukyerɛma anaa asaawa a wɔnhyɛɛ no aduru. Sɛ Yehowa de yɛn bɔne firi yɛn a, ɛnsɛ sɛ yɛte nka sɛ bɔne a ɛte saa no bɛtra yɛn so yɛn nkwa nna a aka nyinaa.
11. Ɔkwan bɛn so na Yehowa tow yɛn bɔne gu n’akyi?
11 Wɔ aseda dwom bi a Hesekia hyehyɛe bere a wogyee no fii owuyare bi mu no, ɔka kyerɛɛ Yehowa sɛ: ‘Woatow me bɔne nyinaa agu w’akyi.’ (Yesaia 38:17) Wɔka Yehowa ho asɛm wɔ ha sɛ ɔfa ɔdebɔneyɛfo a wanu ne ho bɔne tow gu N’akyi, baabi a Ɔrenhu anaasɛ Onnwen ho bio. Sɛnea nhoma bi kyerɛ no, yebetumi aka adwene a ɛwɔ mu ho asɛm sɛ: “Woama me [bɔne] ayɛ sɛ nea ansi.” So ɛnyɛ awerɛkyekye?
12. Ɔkwan bɛn so na odiyifo Mika kyerɛ sɛ, sɛ Yehowa de firi a, Oyi yɛn bɔne fi hɔ koraa?
12 Wɔ nsiesie ho bɔhyɛ bi mu no, odiyifo Mika kaa ahotoso a ɔwɔ sɛ Yehowa de ne nkurɔfo a wɔanu wɔn ho bɔne befiri wɔn no ho asɛm sɛ: ‘Hena ne Onyankopɔn sɛ wo a wutwa mmarato ho ma w’agyapade nkae no? Wobɛtow wɔn bɔne nyinaa agu ɛpo bun mu.’ (Mika 7:18, 19) Susuw nea na saa nsɛm no kyerɛ ma wɔn a wɔtraa ase wɔ Bible mmere mu no ho hwɛ. So na ɔkwan bi wɔ hɔ a wobetumi afa so ayi biribi a na ‘wɔatow agu ɛpo bun mu’? Enti na Mika nsɛm no kyerɛ sɛ, sɛ Yehowa de firi a, oyi yɛn bɔne fi hɔ koraa.
13. Yesu nsɛm “Fa yɛn aka firi yɛn” no kyerɛ dɛn?
13 Yesu de akafo ne wɔn a nkurɔfo de wɔn ka ntam abusuabɔ kyerɛkyerɛɛ Yehowa fafiri mu. Yesu hyɛɛ yɛn nkuran sɛ yɛmmɔ mpae sɛ: ‘Fa yɛn aka firi yɛn.’ (Mateo 6:12) Enti Yesu de bɔne totoo ɛka ho. (Luka 11:4) Sɛ yɛyɛ bɔne a, yɛbɛde Yehowa ‘ka.’ Ɛdefa nea Hela adeyɛ asɛm a wɔkyerɛɛ ase ‘fa firi’ kyerɛ ho no, nhwehwɛmu nhoma bi ka sɛ: “Sɛ́ wode ka bi befiri, wode bɛkyɛ, a worennan bio.” Ɔkwan bi so no, sɛ Yehowa de firi a, otwa ɛka a anka wobebu atia yɛn no mu. Enti abɔnefo a wonu wɔn ho betumi anya awerɛkyekye. Yehowa rennan ɛka a watwam no bio da!—Dwom 32:1, 2.
14. Adwene bɛn na asɛm, “na wɔapopa mo bɔne” no ma wunya?
14 Wɔakyerɛkyerɛ Yehowa bɔne fafiri mu bio wɔ Asomafo no Nnwuma 3:19 sɛ: ‘Enti monsakra mo adwene, na monnan mo ho, na wɔapopa mo bɔne.’ Kasasin a etwa to no kyerɛ Hela adeyɛ asɛm a ebetumi akyerɛ “sɛ́ wɔpopa biribi, . . . wotwam anaasɛ wɔsɛe no.” Sɛnea nhomanimfo bi kyerɛ no, sɛnkyerɛnne kwan so kasa a wɔde dii dwuma wɔ ha no kyerɛ nsaano nkyerɛwee a wɔpopa. Na wɔyɛ dɛn tumi yɛ eyi? Ná adubiri a wɔtaa de di dwuma tete no yɛ biriw, aneneduru, ne nsu a wɔde afra. Sɛ wɔde adubiri a ɛte saa kyerɛw na ɛnkyɛe a, obi betumi de sapɔw a afɔw apopa nkyerɛwee no. Ɛno da sɛnea Yehowa mmɔborohunu yɛ fɛ no adi. Sɛ ɔde bɔne firi yɛn a, ɛte sɛ nea ɔde sapɔw apopa.
Yehowa pɛ sɛ yehu sɛ ‘wayɛ krado sɛ ɔde bɔne befiri’
15. Dɛn na Yehowa pɛ sɛ yehu fa ne ho?
15 Sɛ yesusuw saa mfatoho yi ho a, so emu nna hɔ sɛ Yehowa pɛ ankasa sɛ yehu sɛ wayɛ krado sɛ ɔde yɛn bɔne befiri yɛn bere tenten a ohu sɛ yɛanu yɛn ho koma mu no? Ɛnsɛ sɛ yesuro sɛ obebu bɔne a ɛte saa atia yɛn daakye. Biribi foforo a Bible ka fa Yehowa mmɔborohunu kɛse no ho da eyi adi sɛ: Sɛ ɔde firi a, ne werɛ fi.
“Wɔn Bɔne Nso, Merenkae Bio”
16, 17. Sɛ Bible ka sɛ Yehowa werɛ fi yɛn bɔne a, ɛkyerɛ dɛn, na dɛn nti na wubua saa?
16 Yehowa hyɛɛ wɔn a wɔwɔ apam foforo no mu bɔ sɛ: “Mede wɔn amumɔyɛ mefiri, na wɔn bɔne nso, merenkae bio.” (Yeremia 31:34) So eyi kyerɛ sɛ, sɛ Yehowa de bɔne firi a ontumi nkae bio koraa? Entumi mma saa. Bible ka ankorankoro pii a Yehowa de wɔn bɔne firii wɔn a Dawid ka ho no bɔne ho asɛm kyerɛ yɛn. (2 Samuel 11:1-17; 12:13) Ɛda adi sɛ Yehowa da so kae bɔne a wɔyɛe no. Wɔayɛ wɔn bɔne, wɔn ahonu, ne firi a Onyankopɔn de firii wɔn no ho kyerɛwtohɔ akora so ama yɛn, sɛnea yebesua biribi afi mu. (Romafo 15:4) Ɛnde, dɛn na Bible kyerɛ bere a ɛka sɛ Yehowa ‘nkae’ wɔn a ɔde wɔn bɔne firi wɔn no bɔne no?
17 Hebri adeyɛ asɛm a wɔkyerɛɛ ase ‘mɛkae’ no kyerɛ pii sen asɛm a aba atwam a yɛbɛkae. Theological Wordbook of the Old Testament ka sɛ nea ɛka ho ne “adwene foforo a ɛne sɛ wɔbɛyɛ ho biribi atia ɔbɔnefo no sɛnea ɛfata.” Enti wɔ saa kwan yi so no, bɔne a ‘wɔkae’ fa ade a wɔyɛ tia abɔnefo ho. (Hosea 9:9) Nanso, sɛ Onyankopɔn ka sɛ “wɔn bɔne nso, merenkae bio” a, na ɔrema yɛn awerɛhyem sɛ, sɛ ɔde nnebɔneyɛfo a wɔanu wɔn ho bɔne firi wɔn a, ɔrentwe wɔn aso wɔ saa bɔne no ho daakye. (Hesekiel 18:21, 22) Enti, Yehowa werɛ a efi no kyerɛ sɛ ɔrentwe adwene nsi yɛn bɔne so mpɛn pii sɛ ebia ɔnam so bɛbɔ yɛn sobo anaasɛ ɔbɛtwe yɛn aso wɔ ho. So ɛnyɛ awerɛkyekye sɛ wubehu sɛ yɛn Nyankopɔn de bɔne firi na ɔma ne werɛ fi?
Nea Efi Mu Ba no Nso Ɛ?
18. Dɛn nti na fafiri nkyerɛ sɛ ɔbɔnefo a wanu ne ho no afa ne ho adi wɔ nea ebefi ne bɔne no mu aba biara ho?
18 So krado a Yehowa ayɛ sɛ ɔde bɔne befiri no kyerɛ sɛ ɔbɔnefo a onu ne ho no bɛfa ne ho adi wɔ nea ebefi ne bɔne no mu aba nyinaa ho? Dabida. Yentumi nyɛ bɔne na yɛmfa yɛn ho nni koraa. Paulo kyerɛwee sɛ: “Nea onipa gu no, ɛno ara na obetwa.” (Galatifo 6:7) Yebetumi ahyia ɔhaw a efi yɛn nneyɛe mu ba no bi. Eyi nkyerɛ sɛ, sɛ Yehowa de firi yɛn wie a, ɔma amanehunu ba yɛn so. Sɛ ɔhaw sɔre a, ɛnsɛ sɛ Kristoni te nka sɛ, ‘Gyama Yehowa retwe m’aso wɔ bɔne a mayɛ atwam ho.’ (Yakobo 1:13) Nanso, Yehowa mmɔ yɛn ho ban mfi nea efi yɛn nneyɛe bɔne mu ba nyinaa ho. Awaregu, nyinsɛn a wɔmpɛ, yare a wonya fi nna mu, ahotoso anaa obu a obi hwere—eyinom nyinaa betumi ayɛ bɔne so aba a ɛyɛ awerɛhow a yentumi nkwati. Kae sɛ ɛmfa ho sɛ Yehowa de bɔne a Dawid yɛe a na ɛfa Bat-Seba ne Uria ho no firii no no, wammɔ Dawid ho ban amfi nea efii mu bae a na ɛyɛ awerɛhow no ho.—2 Samuel 12:9-12.
19-21. (a) Ɔkwan bɛn so na mmara a wɔayɛ ho kyerɛwtohɔ wɔ Leviticus 6:1-7 no boaa nea wɔafom no ne ɔbɔnefo no nyinaa? (b) Sɛ yɛn nneyɛe bɔne apira afoforo a, dɛn na yɛyɛ a Yehowa ani gye?
19 Yɛn bɔne betumi de ɔhaw foforo nso aba, titiriw sɛ yɛn nneyɛe no apira afoforo a. Sɛ nhwɛso no, susuw asɛm a ɛwɔ Leviticus ti 6 no ho hwɛ. Tebea a Mose Mmara no ka ho asɛm wɔ ha ne sɛ obi ayɛ bɔne a anibere wom, sɛ ebia ɔnam dwowtwa, asisi, anaa apoobɔ so agye ne yɔnko Israelni nneɛma. Na afei ɔbɔnefo no gye kyim sɛ onni fɔ, na opirim ne koma araa ma atoro ntanka mpo ba mu. Adansefo biara nni asɛm no ho. Nanso, akyiri yi, ɔbɔnefo no ahonim bu no fɔ, na ɔka ne bɔne. Sɛ obenya Onyankopɔn fafiri a, ɛsɛ sɛ ɔyɛ nneɛma abiɛsa ka ho: ɔhyɛ nea ɔfae no ananmu, otua dekode a owiae no ho ka ɔha biara mu nkyem 20 ma ne wura no, na ɔde odwennini ma sɛ bɔne ho afɔrebɔde. Afei, mmara no ka sɛ: “Ɔsɔfo no mpata mma no wɔ [Yehowa, NW] anim, na wɔde ade biara a wayɛ a odi ho sõ no befiri no.”—Leviticus 6:1-7.
20 Ná saa mmara yi yɛ Onyankopɔn nsiesiei a mmɔborohunu wom. Ɛboaa nea wɔayɛ no bɔne a wɔsan de n’agyapade brɛɛ no no, na akyinnye biara nni ho sɛ ne bo tɔɔ ne yam kɛse bere a ɔbɔnefo no gyee ne bɔne toom no. Bere koro no ara, mmara no boaa nea n’ahonim kaa no ma ogyee ne bɔne toom akyiri yi na osiesiee ne mfomso no nso. Nokwarem no, sɛ wanyɛ saa a, na Onyankopɔn remfa mfiri no.
21 Ɛwom sɛ yɛnhyɛ Mose Mmara ase de, nanso saa Mmara no ma yehu Yehowa nsusuwii mu, a adwene a ɔwɔ wɔ bɔne fafiri ho ka ho. (Kolosefo 2:13, 14) Sɛ yɛyɛ bɔne de haw afoforo, na yɛyɛ nea yebetumi de siesie mfomso no a, Nyankopɔn ani gye. (Mateo 5:23, 24) Eyi bɛhwehwɛ sɛ yehu yɛn mfomso, gye tom sɛ yedi fɔ, na yɛpa nea yɛafom no no kyɛw. Afei yebetumi agyina Yesu afɔrebɔ no so asrɛ Yehowa, na yɛanya ahotoso sɛ Onyankopɔn de afiri yɛn.—Hebrifo 10:21, 22.
22. Dɛn na ebetumi abata Yehowa fafiri ho?
22 Te sɛ ɔwofo a ɔwɔ ɔdɔ biara no, Yehowa betumi de afiri yɛn na wateɛ yɛn so ɔkwan bi so. (Mmebusɛm 3:11, 12) Ebia ɛbɛhwehwɛ sɛ Kristoni a wanu ne ho no de hokwan a ɔde som sɛ ɔpanyin, asafo mu somfo, anaa ɔkwampaefo no bɛto hɔ. Ɛbɛyɛ no yaw sɛ ɔbɛhwere hokwan ahorow a na ɛsom bo ma no no akosi bere bi. Nanso, nteɛso a ɛte saa no nkyerɛ sɛ wahwere Yehowa anim dom anaa Yehowa mfa mfirii no. Ɛsɛ sɛ yɛkae sɛ nteɛso a efi Yehowa hɔ no yɛ adanse a ɛkyerɛ sɛ ɔdɔ yɛn. Eye ma yɛn paa sɛ yebegye atom na yɛde adi dwuma.—Hebrifo 12:5-11.
23. Dɛn nti na ɛnsɛ sɛ yɛka da sɛ yentumi nnya Yehowa mmɔborohunu, na dɛn nti na ɛsɛ sɛ yesuasua ne fafiri no?
23 Hwɛ abotɔyam a ɛyɛ sɛ yebehu sɛ yɛn Nyankopɔn ‘ayɛ krado sɛ ɔde bɔne befiri’! Ɛmfa ho mfomso biara a yɛadi no, ɛnsɛ sɛ yɛka da sɛ yentumi nnya Yehowa mmɔborohunu. Sɛ yenu yɛn ho ankasa, fa kwan bi so siesie mfomso no, na yefi komam bɔ mpae srɛ bɔne fafiri wɔ Yesu mogya a ohwie gui no mu a, yebetumi anya ahotoso koraa sɛ Yehowa de befiri yɛn. (1 Yohane 1:9) Momma yensua ne fafiri no wɔ sɛnea yɛne yɛn ho yɛn ho di nsɛm no mu. Sɛ Yehowa koraa a ɔnyɛ bɔne no tumi fi ɔdɔ mu de yɛn bɔne firi yɛn a, so ɛnsɛ sɛ yɛn a yɛyɛ abɔnefo no yɛ nea yebetumi biara de firi yɛn ho yɛn ho?
^ nky. 4 Wɔde Hebri asɛmfua a wɔkyerɛɛ ase “yɛn su” no nso di dwuma wɔ anwenne a ɔnwemfo yɛ ho.—Yesaia 29:16.
^ nky. 10 Nhomanimfo bi ka sɛ na dammaramma “yɛ kɔla bi a ɛka ade mu a wɔhoro a ɛnkɔ. Obosu, osu, adehoro, hyɛ a wɔhyɛ no bere tenten ntumi mma ase ntu.”
2 Beresosɛm 33:1-13 Dɛn nti na Yehowa de firii Manase, na dɛn na eyi kyerɛkyerɛ yɛn wɔ Ne mmɔborohunu ho?
Mateo 6:12, 14, 15 Dɛn nti na ɛsɛ sɛ yɛde firi afoforo bere a yɛwɔ nnyinaso pa a enti ɛsɛ sɛ yɛyɛ saa no?
Luka 15:11-32 Dɛn na mfatoho yi kyerɛkyerɛ yɛn wɔ ɔpɛ a Yehowa wɔ sɛ ɔde bɔne befiri no ho, na ɛno ma wote nka dɛn?
2 Korintofo 7:8-11 Dɛn na ɛsɛ sɛ yɛyɛ na ama yɛatumi anya Onyankopɔn nkyɛn fafiri?